घाँस काटिरहेकी बालिकाको बलात्कारपछि घाटी रेटेर हत्या गर्न खोज्दा…. « Nepal Bahas
घाँस काटिरहेकी बालिकाको बलात्कारपछि घाटी रेटेर हत्या गर्न खोज्दा….
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:११
१६ कात्तिक, जनकपुर । मध्यान्हको घाम थियो । खेतको कान्लामा उम्रिएको घाँस काट्न बालिका घरबाट निस्किन् । बालिका सँगसँगै पछाडी लागे एक भारतीय युवक । पर्सा गाउँपालिका– ५ कि रमिला (नाम परिवर्तन) बारीमा आफ्नै धुनमा घाँस काट्न लागिन् ।
घाँस काट्न लागेकी बेला पछि लागेका युवक पनि बारीमा पुगे । बालिकाको बढ्दै गएको जवानी देखेर मोहित भएका उनी शुरुमा फकाउने प्रयासमा थिए । केहीबेर कुराकानी गरे । घरमा सञ्चो बिसञ्चो सबैलाई सोधे । आमा बिरामी थिइन् ।
बिरामी आमालाई लिएर बुवा सदरमुकाम गएका थिए । घरमा उनी र स साना भाई थिए । बुवा आमा नभएपछि २७ बर्षीय मुकेश मुखियाले रमिलाको जवानी रसपान गर्ने मौका गुमाउन चाहेनन् ।
शुरुमा कुरा गर्न खोजेका उनी पछि नजिक गए । नजिक हुँदै गएका उनले बालिकाको संवेदनशिल अंग छुन थाले । यति गर्दा पनि बालिका आत्तिएकी थिइनन् । दाईले जिस्क्याएको सोचेकी थिइन् । तर मुकेश यतिमै रोकिएनन् ।
जब बालिकाको घाँटी रेट्न खोजियो
यौनको प्यासमा तड्पिएका मुकेशले बालिकाको कपडा खोल्न थाले । तर रमिला चिच्याइन् । शुरुमा सानै स्वरले चिच्याएकी थिइन् । मुकेशले मौका झनै गुमाउन चाहेनन् । त्यसपछि उनले बालिकाको मुख थुने । कपडा खोल्न लागे । खासगरी रमिलाले लगाएको शुरुवाल उनले फुकाले ।
एक हातले मुख च्यापेका मुकेशले सकेका थिएनन् । बालिकाले दुवै हात हटाएर झन् चिच्याउन थालिन् । यसपछि भने मुकेश आत्तिए । डराए । बलात्कार प्रयास गर्दा नसकेपछि उनी डराएनन् मात्रै । बालिकाको ज्यानै लिने धाउन्नमा लागे ।
त्यसपछि उनले बालिकाले घाँस काटिरहेको हँसिया समाते । बालिकालाई तर्साउन उनको आैला काटिदिए । त्यतिले पनि बालिका डराइनन् । उनको मुखको छेउमा हँसियाको चुचो लगाएर च्यात्न खोजे । औला र मुखबाट रगत बगेपछि बालिका डराइन् । तर गुहार माग्न छाडिनन् ।
त्यसपछि निकै आत्तिएका मुकेशले बालिकाको स्वर ठूलो हुँदै गएपछि घाँटी रेट्न तम्सिए । एक हातले मुख समातेर हँसिया घाँटीमा लिएर थोरै काटिसकेका थिए । त्यहीबेला परबाट बाइकको हर्न बज्यो ।
स्पीडमा हर्न बजाउँदै आएको बाइक नजिकै आएपछि मुकेशले घाँटीबाट हँसिया हटाए । यतिञ्जेल बालिका ‘बचाउ बचाउ, मार्न लाग्यो’ भनेर चिच्याएकी थिइन् । घाँटीबाट रगत बगिरहेको थियो ।
एउटा बाइकले बचाएको जिन्दगी
रेटिनका लागि घाँटीमा पुगिसकेको हँसिया देखेर बालिका बेहोस हुन मात्रै बाँकी थियो । रगत भलभली बगिरहेको थिाये । उनी अब म मारिन्छु भन्नेमा ढुक्क थिइन् । तर पनि गुहार माग्न छाडिनन् । कराउँदै गइन् । जब उनको नजिक बाइक आयो । बाइकमा चढेका युवक झरे । र बालिकाको नजिक गए ।
मुकेश यतिबेला हँसिया छाडेर नजिकै बसेका थिए । विभत्स अवस्थामा बालिकालाई देखेपछि उनले बाइकको पछाडी राखेर अस्पताल लिएर गए । प्रहरीलाई भनेर तुरुन्तै मुकेशलाई पक्राउ गर्न लगाए ।
घटना थाहा पाएपछि वडाध्यक्ष उमेश यादव बालिकालाई भेटेर फर्किएका छन् । प्रहरीले भने बलात्कारपछि हत्या गर्नै लागेका मुकेशमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
धनकुटाबाट भरुवा बन्दुकसहित एक पक्राउ
श्रीमतीलाई विष खुवाइ हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ